DAAWO: Kenya oo qaadatay go`aan rasmi oo ku wajahan doorashada Jubbaland.
KISMAAYO(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ee kasoo jeeda Kenya ay maanta dhaqdhaqaaqyo ciidan ka sameeyeen gudaha garoonka diyaaradaha, ka dib markii uu soo baxay is afgaran-waa u dhaxeeya Taliska AMISOM ee guud, kaas oo ku saabsan xalaadda Amniga.
Kenya ayaa la sheegay in ay ka carootay in Taliyaha ugu sareeya AMISOM isagoon aan ogeysiin taliska ciidamadooda uu soo gaaray magaalada Kismaayo, talaabadaas oo ay sheegeen in ay ka soo horjeedo sharciyada ciidamada AMISOM u dagsan.
Ciidamada Kenya waxaa ka go`an in ay si dhab ah u garab istaagto Musharax Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) waxayna taasi bedelkeeda si rasmi ah u diiday in ay qaadato amaro horey uga yimi howlgalka AMISOM.
Wararku waxay kaloo sheegayaan in ay Kenya ka walaacsan tahay hab dhaqanka Taliyaha ciidamada AMISOM ee hadda xilka haya oo u dhashay dalka Itoobiya, kaas oo uu isku dayay in uu diyaarad lasoo raaco wafdi ka socday dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Wasiirka Duulista Hawada & Garoomada ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Oomaar wuxuu maanta daaha ka rogay in uu dib u dhigay safar uu ku tagi lahaa Kismaayo, isagoo sheegay in uu u turay dadka deegaanka.